Mini danpon Laser, Shanghai mutema module, Laser Module - Jiabei
Aspheric Collimator Glass neLens nokuda Diode
Shanghai JIABEI Instruments Company hwagadzwa muna 2003, ndiye revatema zvebhizimisi kutsvakurudza uye kukura, kugadzirwa uye kutengesa Laser zvigadzirwa nyika ongororo indasitiri. zvigadzirwa edu zvinosanganisira Laser yomuropa, Laser modules, Laser dzapiwa uye zvimwe anoenderana nenhumbi rokuvaka. Zvinowanikwa iri ano muguta Shanghai riri chimwe chezvinhu guta rakanaka uye zvakakurumbira China.
Ndezvipi mhando mweya chechetere
1 .. kupatsanura maererano nekubata pfungwa (1) Mechanical mweya pamwero Mechanical pamwero inogona kukamurwa mhando nhatu: bhaa pamwero (aizivikanwawo fitter pamwero), pepuranga pamwero uye boka pamwero. Ivo zvinoratidzwa pamwero sefuro, saka zvokuimba pamwero anonziwo yakati sandara rouchenjeri mhando kana. Mweya pamwero. Wonamatidza mweya pamwero chinhu rectangular pamwero pedengu mudziyo ane chawo kuyera pemvura, uye pamwero sefuro ndee kana zvinogona kugadziridzwa hama kuti nechigadziko kuyera surfa ...
Sei mweya pamwero inoshanda
The sandara chubhu kwomudzimu pamwero yakaitwa regirazi. Rusvingo chechetere chubhu yomukati chinhu curved pamusoro neumwe nharaunda pamusoro curvature. The chubhu ine mvura. Kana pamwero iri tilted, ari matema iri pamwero chubhu chipe kupera chechetere kuziva padanho chinzvimbo. The yakakura nharaunda pamusoro curvature chorusvingo chomudzimu pamwero yomukati, dzakanga chisarudzo, uye vashoma chete nharaunda yose curvature, ari kudzikisa echisarudzo chacho. Naizvozvo, kuti nharaunda yose curvature of p ...
Ndezvipi rokuongorora nzira chechetere?
A pamwero vanowanzochema pedengu chishandiswa kuyera zviduku pamakona. Negore zvokuimba bhizimisi uye chiridzwa kugadzira, rinoshandiswa kuyera kwakarerekera Angle hama kuti chinjikira nzvimbo, iyo planeness uye straightness kuti mutungamiriri njanji kuti muchina mudziyo zvokushandisa, kuti chinjikira nzvimbo uye wehunyambiri nenzvimbo midziyo chokugadza, etc. Next, ndicha- tsanangura ruzivo dhigiri zvizere. 1. A pfupi sumo padanho A pamwero vanowanzochema pedengu chishandiswa kuyera diki ...
mugamuchiri , Total Station , 360 Michina Laser Level Green Beam , mutiraipodhi , Wall chikomboredzo , Laser Light ,